Gazety mockup | Creatives Online
Miha-malaza ny mockups. Lasa singa tena manan-danja amin'ny famolavolana sary izy ireo noho ny zava-misy fa, miaraka amin'izy ireo, ny matihanina dia afaka mampiseho ny famelabelaran'ny mpanjifany amin'ny toe-javatra tena izy izay ahafahan'izy ireo mahazo hevitra tena misy momba ny vokatra. Izany no mahatonga ny mockups ho an'ny gazety, t-shirt, kahie, kalandrie, sns.
Amin'ity tranga ity hifantoka amin'ny mockups magazine isika, ireo endrika izay ahafahan'ny mpanjifa mampiseho ny endriky ny gazetiboky alohan'ny hampiasana vola amin'ny fanontam-pirinty sy ny hazakazaka izay, rehefa tonga ny fanosehana, dia mety tsy ho tsara.
1 Gazety mockup, ny antony hampiasana azy ireo
2 Gazety maimaim-poana 12 azo alaina
2.2 Gazety mockup
2.3 Sokafy gazety
2.4 Gazety fonony
2.5 Scene mockup
2.6 Modely gazety feno
2.7 Fanangonana mockups ao amin'ny Freepik
2.8 Fonosana, fonon-damosina ary modely anatiny
2.9 Mockup misy scenario 60
2.10 Gazety gazety
2.11 Template Magazine kely
2.12 Mockup magazine triple
Gazety mockup, ny antony hampiasana azy ireo
Ny mockup dia singa iray izay manana lanja bebe kokoa eo amin'ireo mpamorona satria mamela ny hampiseho amin'ny mpanjifa ny vokatry ny asany amin'ny fomba tena misy.
Noho izany, ny mockup magazine dia ny fanehoana an-tsary ny gazetiboky iray, na ny fonony na ny pejy anatiny, amin'ny fomba ahafahan'ny mpanjifa mahazo hevitra ny amin'ny endriny rehefa vita pirinty.
Ao amin'ny Internet ianao dia afaka mahita modely mockup magazine maro, ary koa ny lohahevitra hafa, saingy mahasoa ve ny mahita ny asa vita amin'ny zavatra tena misy?
Ny marina dia tsia. Satria izy io koa dia fampiroboroboana ny tenany ho an'ny mpamorona, izay afaka manolotra portfolio tena misy amin'ny asa vitany ary mahatonga azy ireo hijery akaiky kokoa, hanome azy ireo dikany, volume ary eny, matihanina ihany koa.
Izany no antony mihamaro hatrany ny portfolio manomboka miova mba hanolotra endrika mampitambatra ny zava-misy amin'ny tsy azo tsapain-tanana, toy ny sary an-tsary amin'ny ordinatera, boky, sns. Raha tokony hanao pirinty ireo sary nefa tsy manome azy ny contexte, amin'ity tranga ity dia omena amin'ny fanasana ireo izay mahita azy haka sary an-tsaina ny zavatra mitovy amin'izany ao an-tranony.
Gazety maimaim-poana 12 azo alaina
Amin'ity tranga ity dia tsy hanitatra bebe kokoa izahay, satria fantatray fa ny zava-dehibe indrindra dia ny fananana modely mockup magazine samihafa ampiasaina amin'ny famolavolanao, indrindra raha tsy te-hanao izany hatrany am-boalohany ianao. Noho izany, ny safidy atolotray dia ireto manaraka ireto:
Ity dia iray amin'ireo modely mockup magazine fototra, izay mety mila fikasihana kely rehefa ampidirinao ny sary, fa hahagaga izany.
Ao anatin'izany dia manana vahaolana 4800x4000px ianao ary kalitao 300dpi.
Safidy iray hafa dia ity gazety, sokafy ary ataovy toa mihantona eny an-habakabaka. Izany dia ahafahanao mametraka ny sary ao amin'ny zavatra marani-tsaina amin'ny fomba izay ahitana ny vokatra farany.
Raha te hanome azy kely ianao misongadina amin'ny fonony, fa raha tsy manambara izany 100%, ity dia iray amin'ireo mockups magazine azonao ampiasaina. Ao anatin'izany dia tsy ny fonony ihany no hitanao, fa ny iray amin'ireo pejy voalohany amin'ny gazety ihany koa.
Ny fampidinana ny eto.
Famoronana gazetiboky ny fanamafisana indrindra ny fonony dia ity safidy ity, izay misy fiaviana volondavenona misy ny gazety eo afovoany. Aza manahy anefa fa azonao atao ny manova mora foana ny fototra volondavenona ho loko hafa.
Ny fampidinana eto.
Ny iray amin'ireo olana lehibe izay ananan'ny magazine mockups rehetra nampianarinay anao taloha dia ny scenario iray ihany no aseho, na ny fonony na ny ampahany anatiny amin'ny gazety, fa ahoana kosa raha te hahita bebe kokoa ny mpanjifa?
Dia io môdely io no mety ho tadiavinao satria a mockup izay ahitanao tranga dimy samihafa, manomboka eo amin'ny fonony aloha ka hatrany amin'ny fonony aoriana, ny pejy dia misokatra amin'ny diagonaly, iray hafa afovoany ary andian-gazety miaraka.
Modely gazety feno
Safidy iray hafa hananana ny fonony, anatiny ary akaiky (izany hoe fijerena akaiky) dia ity. Ao anatin'izany ianao dia afaka manolotra antsipiriany manokana momba ny pejy sasany ho an'ny mpanjifanao.
Azonao atao ny manova ny lokon'ny lamosina sy ny loko.
Fanangonana mockups ao amin'ny Freepik
Amin'ity tranga ity Tsy sarin'ny gazetiboky fotsiny no omenay anao, fa safidy maromaro amin'izy ireo. Ary amin'ny Freepik dia afaka mahazo sary maro samihafa ianao mifototra amin'ny zavatra tadiavinao na ny fomba tianao atolotra ny mpanjifa.
Mazava ho azy, tadidio fa raha tsy manana kaonty ianao dia tsy maintsy manondro ny maha-mpanoratra azy. Ary raha manana kaonty Freepik ianao dia tsy mila izany.
Fonosana, fonon-damosina ary modely anatiny
Amin'ity tranga ity dia tena fototra ity mockup ity, saingy mandeha hatrany hatrany, asehoy ny fonony aloha, ny fonony aoriana ary ny pejy roa ao anatiny. Tsy misy intsony.
Azo ovaina ny fiaviana ary aseho ao daholo ny zava-drehetra, ka tsy maintsy mamadika ny pejy na mankany amin'ny tranokala hafa ny mpanjifa mba hahitana ny vokatra feno.
Mockup misy scenario 60
Raha te hanome fahafahana bebe kokoa ho an'ny mpanjifa ianao mba haka sary an-tsaina ny endriky ny gazetiboky, dia manana an'ity dikan-teny ity ianao. Mifanaraka amin'ny karama iray izy io, ka mamela anao hanova ny zava-drehetra, manomboka amin'ny habeny ka hatramin'ny fanapahan-kevitra. Mba hanome anao hevitra ny amin'ny fomba fijery dia mihoatra noho ny ampy.
Araka ny fantatra, ny faran’ny herinandro, indrindra ny gazety, dia ahitana gazety manokana, toy ny kolontsaina, toekarena, sns. Eny, heverinao ve fa tsy misy mockup magazine ho an'ny gazety?
Eny misy ary eto misy ohatra izay azonao atao ny mampiseho ny fonony aoriana, ny fonony aloha ary ny ampahany amin'ny pejy voalohany.
Template Magazine kely
Ho an'ny gazety kely kokoa, karazana A5, Ity dia mety ho fomba tsara hanehoana ny famolavolana pejy anatiny.
Mockup magazine triple
Azonao sary an-tsaina ve ny mampiseho pejy telo amin'ny mpanjifa? Eny e, amin'ity safidy ity dia azonao atao izany. Tsy hoe handeha hahita ny pejy telo feno, fa ny ampahany tsara amin'izy ireo no manao izany.
Araka ny hitanao dia misy safidy maro azo isafidianana, ary maro hafa ny mockups magazine izay maimaim-poana ary azonao andramana amin'ny endrikao. Ny soso-kevitray tsara indrindra dia ny mandany fotoana kely hijerena ny endriny amin'ny modely sasany ary avy eo misafidy ny tsara indrindra hanehoana izany amin'ny mpanjifa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Inspiration » Fanesoana amin'ny magazine